गाउँको समारोहमा विभिन्न कर्मचारी स्थानिय स्तरको नेता र समाजिक अभियन्ताहरु को जमघट थियो। पुरानो कपडा फाटेको चप्पल नमिलेको दाडि निन्याउरो अनुहार लिएर उपस्थित मेरा बा मैतिर सिकाउदै उ मेरो छोरो भनेको पुरानो याद आजपनी आखा वरीपरी घुमिरहन्छ । दया लाग्दो पहिरन गरेर किन मलाई परिचय गराउन खोज्नुभएको होला? अरुजस्तै कोट पाईन्ट जुता लगाएर आउन नसक्कने बापनि कस्तो कन्जुस उबेला सोच्ने गर्थे! तर आजभोली राम्ररी बुझ्ने भएको छु बाले गरेका गुनहरू निकै मूल्यवान र महत्वपूर्ण हुँदारहेछन् सन्तानका लागि।
समाजिक काममा मलाई पठायर पसिना झार्दै घंटौ कुटोकोदालो गर्ने मेरो बालाई अंगालो हालेर बेसरी रुनु मनछ ।
उहालाई सितल छहारीमा बसालेर मैले मेहनत गरी देखाउन मनछ । बा भन्ने गर्नुहुन्छ मलाई त बाट केहि चाहिदैन आफ्नो ज़िन्दगी उज्जवल बना । सधै सत्यता को बाटो हिड कुभलो कसैको नसोच अन्यायको बिरुद्द चाहि खुलेरै प्रतिकार गर ।
यहीनै असल मान्छेको चिनारी हो ।
बा सुनाउनुहुन्छ प्रदेशमा रहदा छोराले चिठि पठायको थाहापायर हतारिदै ल्यादिने मान्छे कहांपुगे ।चिटिक्क बेहोरा मिलायर तैले लेखेको चिठ्ठी सुन्दा सुन्दै आंखाको डिलसंम आयको आशुलाई रोक्नै सकेन ।आफु अनपढ भयका कारण पढ्ने व्यक्ति अरु नै थिए।त्यसैले लाज होला भनी खुलेर रुन पनि सकेन।बिस्तारै हातहरुलाई परेला तीर सार्दै पछाडि फर्किए।पत्रलाई खल्तीमा राखे र सधैजसो काममा लागे।एकान्तमा हुँदा प्रायः त्यो कागजलाई खोलेर हेरीरहन्थे , केही नबुझे पनि सबै बुझेजस्तो लाग्दथ्यो ।
छोराले पढलेख गर्दैछ मेरोपनीत साहारा बन्दैछ सोचेर मनमा खुसी पलाउँथ्यो। सचिकै त्यो कागजले ममा नयाँ आशाको किरण छरेको थियो। मैले लेखेको एउटा कागजको टुक्रालाई बा यति माया गर्नुहुन्छ भने मेरा लागि के के गर्नुभयो होला । बालाई सुनेर म टिलपिल भइसकेको थिय!
खै आँखामा झार गयो कि भनेर टारे । घराएसी काममा पनि बाको अदभुत कला छ वस्तुभाउ को हेरचाह होस् या खेतीकिसानी हामीलाई देखेर झम्टिन खोज्ने या टाढा भाग्ने जन्तु जनावरहरू बालाई देखिपछि रमाएको संज्ञा दिइरहेका हुन्छन्। बालाई धेरै सुखी बनाउन सकेको छैन यो पीडा एकातिर छँदैछ। त्यतिबेला खुशी पनि लाग्छ जब मान्छेहरु भन्ने गर्छन् तिम्रो बा झट्ट हेर्दा अलि कडा स्वभावको भएपनि मन सफा छ सत्य को साथ दिनुहुन्छ समाजको प्रष्ट मन्छे नै उहाँलाई देखेँ अरु त समय अनुसार बदलिन्छन साच्चीकै बा अरु भन्दा फरक हुनुहुन्छ।
खाना खाईस या नाई स्कुलमा के गरीस कसैसँग झगडा त भएन अलि उदास देखिन्छस केही समस्या त छैन जस्ता कैयौं प्रश्न गर्ने वहालाई खुसी पर्ने कुनै शब्द छैन मसँग आज।उबेलामा कपडा जुत्ता घडी चाहियो भनेर सधै झगडा गर्ने मैले आजसम्म कुनै गतिलो उपहार किनेर दियको छैन बालाई तर पनि उहाँ खुसी नै हुनुहुन्छ।निस्वार्थ पुरा जिवन परिवारको लागि समर्पित गर्नुहुने बा कुनै पन्नामा सीमित कथा होइन सिंगो किताब हो।साच्चिकै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश नै बाहो ।सामाजिक सञ्जालमा 364 दिन सम्म आफ्नो मात्र फोटो हालेर रमाउनेममा दुनियालाई देखाउन को लागि आज बाको फोटो हाल्ने हिम्मत भएन।बालाई एकदिन मात्र किन 365 दिन नै मानसम्मान गर्नुपर्यो किनकि एउटा बाबाका लागि सन्तान जिन्दगीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ ।Love you 💓BA💓